ဘုရင့်ကောလိပ်၊ ကိန်းဘရစ်ခ်ျ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဘုရင့်ကောလိပ်သည် ကောလိပ်ဖွဲ့စည်းပုံအရ ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ် ၏အခွဲဖြစ်ပြီး ကိန်းဘရစ်ချ်, အင်္ဂလန်၏ လက်အောက်၌တည်ရှိသည်။။ ပုံမှန်အားဖြင့် အမျိုးကောင်းသမီးဘုရင့်ကောလိပ်နှင့် စိန့် နီကိုလပ်စ် ကိန်းဘရစ်ခ်ျရှိကောလိပ်သည် ကမ်မြစ်ဘေးတွင်တည်ရှိပြီးမြို့လယ်ရှိ ဘုရင့်စစ်ရေးပြကွင်း ဘက်သို့မျက်နှာမူထားသည်။ ဤကောလိပ်ကို ဟင်နရီ ၆ လက်ထက် ၁၄၄၁ခုနှစ်၌ တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနောက် အမွှာညီအစ်မကောလိပ်နောက်တစ်ခုဖြစ်သည့် ဧတန်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဘုရင့်၏ကောလိပ်အစီအစဉ်ကို ဝါးရော့ဖ်သည်ရို့စ် နှင့်ရန်ပုံငွေရှားပါးလာခြင်းတို့က ပျက်ပြားစေခဲ့သည်။ ၁၅၀၈ ခုနှစ်တွင် ဟင်နရီ ၇ သည် ကောလိပ်ကို စတင်စိတ်ဝင်စားသည့်အချိန်အထိသူ၏စီမံကိန်းအသစ်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန်အတွက် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေဖြင့် စီမံကိန်းတွင်တိုးတက်မှုအနည်းငယ်သာရှိခဲ့သည်။ ၁၄၄၆ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သော ကောလိပ်၏ ပေါသထ(ဘုရားကျောင်းငယ်) ကို ၁၅၄၄ ခုနှစ်တွင် ဟင်နရီ (၈) လက်ထက်တွင်အပြီးသတ်ခဲ့သည်။
52°12′15″N 0°06′58″E﻿ / ﻿52.2043°N 0.1162°E﻿ / 52.2043; 0.1162﻿ (King's College)ကိုဩဒိနိတ်: 52°12′15″N 0°06′58″E﻿ / ﻿52.2043°N 0.1162°E﻿ / 52.2043; 0.1162﻿ (King's College)
၁၄၄၁; ၅၈၁ နှစ် အကြာက (၁၄၄၁)
Sable, three roses argent,achief per pale azure and gules charged on the dexter side withafleur-de-lis and on the sinister withalion passant gardant or
Central Cambridge၏ မြေပုံကို ပြသရန်
Cambridge၏ မြေပုံကို ပြသရန်
ဘုရင့်ကောလိပ်ပေါသထတွင်အသုံးပြုထားသော ဂေါ့သစ်နှင့် အင်ဂလိုတို့၏ဗိသုကာလက်ရာများ သည်အကောင်းဆုံးအဖြစ်ဥပမာပေးပြသနိုင်သည့် အရာဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရောင်စုံမှန်ပြတင်းကြီးများတည်ရှိပြီး ဘုရားကျောင်းတော်၏အလင်းပေါက် ပြတင်းပေါက်များနှင့်သစ်သား ရွတ်ဖတ်ပလ္လင်ဖန်သားပြင်သည်ထိုခေတ်အခါကအကောင်းဆုံးသောအရာများဖြစ်သည်ကို ညွှန်းဆိုသည်။ အဆိုပါအဆောက်အ ဦး ကင်းဘရစ်၏အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ရှုမြင်သည်။ ချာ့ချ်၏ သံစုံတီးဝိုင်း သည် King's ကျောင်းသားကျောင်းသားများနှင့်အနီးရှိ King's College School မှ choristers များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အအောင်မြင်ဆုံးနှင့်ကျော်ကြားဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်ခရစ်စမတ်အကြိုခရစ်စမတ်အကြို နိဂုံး ၉ ခုနှင့်ကာရိုးလ်ပွဲတော် (ကောလိပ်မှူးချုပ် အဲရစ်မီနာ - ဝှိုက် ၏ King's အတွက်အထူးရည်ရွယ်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခု) ကိုဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိနားထောင်သူပေါင်းများစွာသို့ထုတ်လွှင့်သည်။  
ကောလိပ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကျောင်းသားများသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းများကျင်းပရန်အတွက်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားသည့်အခန်းများစွာရှိသည်။ များသောအားဖြင့်ဤသို့ပြုလေ့ရှိသည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင်ဘုရင့်နိုင်ငံရေး၊ ထင်းဂင်းသင်္ချာအသင်း၊ သမိုင်းအဖွဲ့အစည်း၊ မာက်စ်ဝါဒီလူ့အဖွဲ့အစည်း၊
King's ၏အဓိကဘားမှာလူမှုရေးပွဲများ၊ ဖွင့်လှစ်ထားသည့်မိုက်ကယ်ညများ၊ ကျောင်းသားများအကြားအလွတ်သဘောတွေ့ဆုံမှုများနှင့်အငြင်းအခုန်များနေရာဖြစ်သည်။ တေးဂီတသို့မဟုတ်ကခုန်သည့်နေရာနှင့်မကြာသေးမီက Sartre's No Exit  နှင့် monologue showcase event များပါဝင်သော King's Drama ထုတ်လုပ်မှုအတွက် set တစ်ခုဖြစ်သည်။ [ အသစ်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည် ] မကြာသေးမီကပင် Bunker ကို King's Electronic Music Society မှကျောင်းသားများအား DJ ကိုမည်သို့လေ့လာရမည်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ကိန်းဘရစ်ချ်ကောလိပ်တော်တော်များများသည် မေလအပတ် ကို မေလ (ဇွန်လတွင်အမှန်တကယ်ကျရောက်သည်) နှင့်အတူဆင်နွှဲကြသော်လည်း ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းက စ၍ King's Affair ဟုလူသိများသော June Event (မေလဘောလုံးပုံစံမဟုတ်သည့်ပုံစံ) ကိုကျင်းပခဲ့သည်။ နှစ်စဉ်မေလ၏ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည (များသောအားဖြင့်ဇွန် ၂၀ ခန့်) တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ရှေ့တန်းတရားရုံး၊ ဘား၊ ခန်းမနှင့်ချာ့ချ်တွင်နေထိုင်သောကျောင်းသား ၁၅၀၀ ခန့်တက်ရောက်ကြသည်။ အတိတ်အဆိုတော်များသည် Stranglers ၊ Fatboy Slim ၊ Noah နှင့် Whale နှင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Clean Bandit တို့ ပါဝင်သည်။ Mingles ဟုလူသိများသည့်သက်တမ်းတစ်ခုစီ၏အဆုံးသတ်တွင်ကျောင်းသားများမှဖွင့်လှစ်သည့်ကောလိပ်ပါတီပွဲများလည်းရှိသည်။
King's တွင်အပြိုင်အဆိုင်ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသောကျပန်းအားကစားအသင်းများရှိသည်။ King's College Boat Club သည်မည်သည့်အသင်းမဆိုအသင်း၏အသင်းဝင်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Henley Royal Regatta ရှိ Temple Challenge ဖလား တွင်ပြိုင်ပွဲဝင်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မီသောပထမဆုံးအမျိုးသားလှေသည်  နှစ်အတန်ကြာဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများအပြီးတွင်လှေသည် Lent 2019 တွင်ပထမ ဦး ဆုံးဌာနခွဲနှင့် May Bumps ရှိအလယ်အလတ်စားပွဲသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ထင်ရှားသောကလပ်တစ်ခုမှာ King's တောင်တက်နှင့်ကေးကေးအသင်းမှဖြစ်ပြီး Cam Cam (ကောလိပ်မှ ဖြတ်၍ ပြေးဆွဲသည်) တွင်အသုံးပြုရန်ကယက်လှေများရှိပြီးတက္ကသိုလ်အားလပ်ရက်များအတွင်းကောလိပ်ကျောင်းသားများအတွက်တောင်တက်ခြင်း၊  ၎င်း၏ရပ်ဘီအသင်းသည် Corpus Christi နှင့် Clare ကောလိပ်များနှင့်ပူးပေါင်းပြီး CCK ဟုလူသိများသည်။ ၎င်း၏သမိုင်းဝင်မောက်သည်သန့်ရှင်းသောဉာဏ်ပညာ၏ဆင်ဖြစ်သည်။
King's College သည် ကင်းဘရစ် King's College ၏ နေရာဖြစ်သည်။ ၁၅ ရာစုတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးယခုခေတ်တွင်ကျော်ကြားသောအင်္ဂလိပ် choral အစဉ်အလာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာတော့ဒီသီချင်းဟာ King's College Recordings ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒါကအနုပညာလွတ်လပ်ခွင့်ပိုရစေတယ်။ ၎င်း၏ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျော်ကြားမှုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခရီးစဉ်များနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲမှ ဦး ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ 
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံး ၀ န်ကြီးချုပ် Robert Walpole
MR James, ပညာရှင်နှင့်သရဲပုံပြင်စာရေးဆရာ
အတွေးအခေါ်ပညာရှင် George Santayana
EM Forster ၊ ဝတ္ထုရေးဆရာ
စီးပွားရေးပညာရှင် John Maynard Keynes
ကဗျာဆရာ ရူပါ့ဘရွတ် က
Philip Noel-Baker ၊ အိုလံပစ်ဆုတံဆိပ်နှင့်နိုဘယ်ဆုရှင်ငြိမ်းချမ်းရေး
Xu Zhimo ကဗျာဆရာ
Alan Turing ၊ သင်္ချာပညာရှင်နှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်
ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုရှင်နှစ် ဦး ဖြစ်သော ဖရက်ဒရစ်ဆန်ဂါ
Salman Rushdie, ဝတ္ထုရေးဆရာ
Mervyn King Governor of the Bank of England သည် အင်္ဂလန်ဘဏ်၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဖြစ်သည်]]
လူရွှင်တော် ဒေးဗစ် Baddiel
Zadie Smith, ဝတ္ထုရေးဆရာ
တစ်စုံတစ် ဦး ကကောလိပ်တက်ခွင့်ရသောအခါသူသို့မဟုတ်သူသည်ဘဝအတွက်အသင်း ၀ င်တစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ ကောလိပ်ကျောင်းသားဟောင်းများသည် ၀ န်ကြီးချုပ်များ၊ ဂိုဏ်းချုပ်များ၊ သမ္မတများနှင့်ပညာရှင်များပါဝင်သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် အချိန်ကာလ သည် ၂၀ ရာစု၏“ ဩဇာအရှိဆုံးနှင့်အရေးအပါဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များ” ဟုအဘယ့်ကြောင့်ဆိုသောစာရင်းတစ်ခုကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ နာမည်တရာစာရင်းတွင် King's မှသူနှစ် ဦး ကိုပြောခဲ့သည်။ Alan Turing နှင့် John Maynard Keynes သည်ကောလိပ်တွင်ကျောင်းသားများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်ကြသည်။ 
ဘုရင်နှင့်ပညာရေးတွင်ပြည်နယ်နှင့်အစိုးရအကြီးအကဲများသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံး ၀ န်ကြီးချုပ် ရောဘတ်ဝေါ်လ်ပိုလ်တို့ ပါဝင်သည်။ ၁၈ ရာစုကျောင်းသားဟောင်းများတွင်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သူ၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် ဗြိတိသျှစိုက်ပျိုးရေးတော်လှန်ရေးတွင် သူ၏အခန်းကဏ္,၊ တရားသူကြီးနှင့် Lord Chancellor Charles Pratt၊ ကျော်ကြားသော ဒုတိယ အတွင်းရေးမှူး Charles Townshend နှင့် 2nd Viscount Townshend (Turnip Townshend) တို့ပါ ၀ င်သည်။ ကန်ဒန်း ။ ဘုရင် Elizabeth လိရှဗက် ကိုအသံလွှင့်သူ Francis Walsingham ၊
King's တွင်ပညာသင်ကြားခဲ့သောနိုင်ငံရေးသမားများတွင်ယခင်ဗြိတိသျှပြည်ထဲရေးအတွင်းရေးမှူး Charles Clarke ၊ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်၏ သက်တူရွယ်တူများနှင့် အဓိပတိ ၊ Turville ရှိ Baron Sainsbury နှင့် Martin Bell တို့ ပါဝင်သည်။
ဥပဒေတွင်ကျောင်းသားဟောင်းများသည်ရှေ့နေနှင့်ဒုတိယအဓိပတိ ရောဘတ်အလက်ဇန်းဒါး၊ ဝီဒွန်မှဘရွန်အလက်ဇန်းဒါး၊ ဗြိတိန်တရားရုံးချုပ်၏ ဥက္က President ္ဌ နီကိုးလပ်စ်ဖိလစ်ပ်၊ နှင့်ဥရောပသမဂ္ဂတရားရုံး၏အထွေထွေတရားရုံး၏တရားသူကြီး Geert de Baere ။
ဘာသာရေးတွင်ကျောင်းသားဟောင်းများသည် ၁၆ ရာစုပရိုတက်စတင့်အာဇာနည် ဂျွန်ဖရစ် ၊ ကန် တာဘာရီဂိုဏ်းချုပ် ဂျွန်ဆမ်နာ နှင့် ဝီလ်စမစ်သောမတ်စ် တို့ပါဝင်ပြီး ရစ်ချတ်ကော့စ်သည် ၀ စ်မင် နင် ၏ မဟာဌာနမှူး နှင့်နောက်ဆုံးတွင်အီလီ ဆရာတော် အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။
စာပေနဲ့ကဗျာအတွက်ထူးဆန်းသောကျောင်းသားဟောင်းများစာရေးသူတို့ပါဝင်သည် Zadie စမစ်, Salman Rushdie, မာတင် Jacques, JG Ballard နှင့် EM Forster, နိုဘယ်ဆုဆုရှင် ပက်ထရစ် White က, အကဗျာဆရာတွေ Rupert Brooke, Walter Raleigh နှင့် Xu Zhimo, နှင့်ပြဇာတ်ရေးဆရာ စတီဖင် Poliakoff ။ တစ္ဆေဇာတ်လမ်းရေးသားသူနှင့်အလယ်ခေတ်ဆရာ ဂျိမ်းစ် သည်သူ၏ဘဝများစွာကို King's တွင်ကျောင်းသားတစ် ဦး၊ Aristotle Sir John Harington ၏စာရေးသူနှင့်ဘာသာပြန်သူသည် သန့်စင်ခန်းနှင့်အိမ်သာ ကိုတီထွင်ခဲ့ခြင်းအတွက်လူသား၏အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခဲ့သည်။
အနုပညာတွင်ကျောင်းသားဟောင်းများသည်အတွေးအခေါ်ပညာရှင် George Santayana ၊ သမိုင်းပညာရှင် Benedict Anderson ၊ Eric Hobsbawm နှင့် Tony Judt ၊ တေးရေးဆရာ George Benjamin ၊ Judith Weir ( ဘုရင်မဂီတ၏မာစတာ )၊ သောမတ်စ် အက်ဒ်စ် နှင့် ဂျူလီယန်အန်ဒါဆင် ၊ ၏မူလအဖွဲ့ဝင်များက ဂရမ်မီဆုကို -winning တစ် cappella အုပ်စုသည် ဘုရင့်အဆိုတော်များ ; ရိုးရာဂီတပညာရှင် ဂျွန်စပီး ; လူရွှင်တော် David Baddiel ၊ နှင့်မော်ဒယ် လီလီကိုးလ် ။
အဆိုပါသိပ္ပံနှင့်လူမှုရေးသိပ္ပံများတွင် King ရဲ့ကျောင်းသားဟောင်းများဗြိတိသျှလူမှုဗေဒပညာရှင်တို့ပါဝင်သည် အန်သိုနီ Giddens သည်ရူပဗေဒပညာရှင် ပက်ထရစ် Blackett, ထိုဓာတုဗေဒပညာရှင် ဖရက်ဒရစ်ဆန်းဂါးဆို, အ palaeontologist ရစ်ချတ် Fortey, ထိုစီးပွားရေးပညာရှင် ဆရာယောဟနျ Craven, နိုင်ငံရေးသီအိုရီ ယောဟနျသ Dunn, အင်ဂျင်နီယာက ချားလ်စ် Inglis, နှင့်သင်္ချာပညာရှင် နှင့် eugenicist ကားလ် Pearson ။ အင်္ဂလန်ဘဏ်၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mervyn King ကိုလည်း King's တွင်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ Acorn နှင့် ARM မှ နည်းပညာလုပ်ငန်းရှင် Hermann Hauser သည်ထိုတွင်ဘွဲ့လွန်ရူပဗေဒကိုလေ့လာခဲ့သည်။
လက်ရှိဘုရင်၏ထင်ရှားသောအပေါင်းအဖော်များမှာ Whitehead နှင့် Adams 'Prize Winner Clément Mouhot နှင့်တော် ၀ င်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် Clay သုတေသနဆုရှင် Mark Gross (သင်္ချာပညာရှင်) တို့ ပါဝင်သည်။
Charles Glover Barkla သည် ၁၉၁၇ ရူပဗေဒဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆု အားသူ၏ထူးခြားသောဒြပ်စင်၏Röntgenဓာတ်ရောင်ခြည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြင့်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။   
King's နှင့် ပက်ထရစ်ဘလက်ခ်ျ သည် ၁၉၄၈ ရူပဗေဒနိုဘယ်ဆု ကိုသူ၏ Wilson cloud chamber နည်းစနစ်တီထွင်မှုနှင့်နျူကလီးယားရူပဗေဒနှင့်စကြဝradiationာဓာတ်ရောင်ခြည်နယ်ပယ်များတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများအတွက်ရရှိခဲ့သည်။  
၁၉၅၈ တွင်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆု ကိုဘုရင်၏အဖော်ဖြစ်သော ဖရက်ဒရစ်ဆန်ဂါ သည်ပရိုတင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ အထူးသဖြင့်အင်ဆူလင်ဓာတ်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။  Sanger သည် ၁၉၈၀ တွင် Walter Gilbert နှင့်အတူဘူမိဗေဒဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဒုတိယနိုဘယ်လ်ဆုကို "ဘေ့စ်ဆက်အက်ဆစ်များ၌အခြေပြုအစီအစဉ်များကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်သူတို့၏ပံ့ပိုးမှုများ" ကိုရရှိခဲ့သည်။  Sanger သည်နိုဘယ်လ်ဆုကိုနှစ်ကြိမ်ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သောလူလေး ဦး အနက်မှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ဖိလစ်နို - ဘေကာ သည်ကမ္ဘာ့လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးအတွက် ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆု ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ 
ပက်ထရစ်ဝှိုက် သည် ၁၉၇၃ ခုနှစ် စာပေတွင်နိုဘယ်ဆု ကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ ထိုစာအုပ်သည်တိုက်ကြီးအသစ်ကိုစာပေတွင်စတင်မိတ်ဆက်ပေးသောမော်ကွန်းနှင့်စိတ်ပညာဆိုင်ရာအနုပညာအတွက်ဖြစ်သည်။ 
King's ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Richard Stone သည် ၁၉၈၄ ခုနှစ် စီးပွားရေးသိပ္ပံနိုဘယ်ဆု ကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ “ နိုင်ငံ့ငွေစာရင်းစနစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်အခြေခံကျသောပံ့ပိုးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ပင်ပင်ကိုယ်မူလစီးပွားရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏အခြေခံကိုများစွာတိုးတက်စေခဲ့သည်” 
ဆစ်ဒနီဘရိုင်နာ အား H. Robert Horvitz နှင့် John E. Sulston တို့နှင့်အတူ ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဇီဝကမ္မဗေဒသို့မဟုတ်ဆေးပညာနိုဘယ်ဆု ကိုချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည် 
Oliver Hart သည် ၂၀၁၆ စီးပွားရေးသိပ္ပံနိုဘယ်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရပြီး Bengt Holmstrom နှင့်အတူကန်ထရိုက်သီအိုရီတွင်ပါဝင်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ 
King's College ကို Provost လို့ခေါ်တယ်။ လက်ရှိ Provost, As of 2013[update] , Michael Proctor သည် ရူပဗေဒပညာရှင်နှင့် Astrophysical Fluid Dynamics ပါမောက္ခဖြစ်သည်။
ကောလိပ်၏ ည့ ်သည်မှာ လင်ကွန်း ၏ ဆရာတော်ဖြစ်သည် ။  ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ Christopher Lowson ။
↑ University of Cambridge (6 March 2019). "Notice by the Editor". Cambridge University Reporter 149 (Special No 5): 1.
↑ ၂.၀ ၂.၁ King's College။ Undergraduate Study။ University of Cambridge။
↑ The roses are frequently represented as barbed and seeded proper as above. See pp. 54–57, The Cambridge Armorial (1985), London: Orbis.
↑ King's College Accounts။ King's College, Cambridge။ 26 May 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 March 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ see e.g. the logo of the city council, Cambridge City Council။ 19 July 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ History of A Festival of Nine Lessons and Carols။ 19 July 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Hundreds queue overnight to watch Kings College Choir in Christmas concert"။ 19 July 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ No Exit news item။
↑ KCBC။ KCBC။ 14 September 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ King's Mountaineering and Kayaking Association။ 14 September 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Choir of King's College, Cambridge | King's College Cambridge။
↑ Isaacson၊ Walter။ "Who Mattered And Why"၊ Time Magazine၊ 31 December 1999။ 29 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Nobel Prize 1917: Charles Glover Barkla Biography။
↑ "Charles Glover Barkla"။
↑ Biography: Charles Glover Barkla။
↑ The Nobel Prize in Physics 1948။
↑ Nobel Prize Winners။
↑ The Nobel Prize in Chemistry 1958။
↑ The Nobel Prize in Chemistry 1980။
↑ The Nobel Peace Prize 1959။
↑ The Nobel Prize in Literature 1973။
↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984။
↑ The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2002။
↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2016။
↑ King's College Statutes 2007, s. P(1).
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘုရင့်ကောလိပ်၊_ကိန်းဘရစ်ခ်ျ&oldid=697700" မှ ရယူရန်
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။